firewall problem - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော် လက်တော့ ၀ယ်တုန်းက မက်စ်ဖီး (Mac Fee) anti virus ပါလာတယ်ဗျာ.
သိပ်မကြာဘူး စက်ကို ဟက်ခံရတယ်လို့ သူက(အန်တီဗိုင်းရပ်ဆော့ဝဲ) ရုပ်တရက် ထကြေညာတယ်။ အိုင်ပီပါ သူက ပြောပေးတယ်။
သိပ်လည်း မကြာဘူး... ဖိုင်းယားဝေါ က အက်တစ်မဖြစ်တော့ဘူး။ ၀င်းဒိုး အော်တို အပ်ဒိတ်လည်းမရတော့ဘူး။
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဖိုင်းယားဝေါ (firewall) ကို ပြန်တင်လိုက်တော့ error 0x80070424 ဆိုပြီးပြပါလေရော။
ကျွန်တော်လည်း Mac Fee ကြောင့်ပဲ လို့ဆိုပြီး uninstall လုပ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်က အဲဒိ Mac fee ကိုလည်း မကြိုက်တာပါတယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ kaspersky antivirus ကို trial version နဲ့စမ်းသုံးကြည့်တယ်။ အဲဒါလည်း window firewall က အဲဒါပဲ ထပ်ပြတယ်။ ဒါနဲ့ Nod325ကို ၀ယ်တင်တယ် မရဘူး။
မိုက်ကရိုဆော့ကတော့ ရှင်းနည်းပေးတယ် မရဘူး။ ဘယ်လိုမှ လုပ်မရတော့ဘူးဆိုတော့ ၀င်ဒိုးပြန်တင်ရမလိုဖြစ်နေတယ်။
အလွယ်တကူ ရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလေးများရှိရင် ပြောပေးကြပါဦးဗျာ။
So interesting topic.I hear some attacking is block wireless or wire NIC.
clean window install is complete for u r firewall, i think so. some repairing havealittle errors.
Firewall Settings ကို ပြန်ပြီး restore လုပ်ကြည့်ပါ။
Licensed Windows ကို သုံးထားတာဆိုရင်တော့ Microsoft Security Essentials ကို သုံးဖို့ အကြံပေးချင်တယ်။